Idume kakhulu kwentsha yanamuhla yinkqubo yokuhlobisa izindebe - lokhu kuyisikhathi sakhe. Lona umhlobiso omuhle kakhulu, uma nje wenziwe ngekhwalithi. Unganaki iqiniso lokuthi le nqubo yesikhumba ibhekisela ekungeneleleni okuhlinzayo. Ngakho-ke, kufanele kwenziwe ezikoleni ezikhethekile. Uma kungenjalo, izinkinga zingenzeka ngemuva kokugqunywa kwendlebe, futhi lokhu akubukeka kuhle emehlweni. Ngakho-ke, ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo namasu okugcoba i-lip.
Ukubhoboza imilenze kuyisikhwama sesikhumba esiseduze ne-lip kanye nokufakwa komhlobiso wekhwalithi. Lolu hlobo lokubhoboza lwazalwa esikhathini esidlule. Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa ezedlule, ukubhoboza imilomo kwakungumhlobiso womphakathi ophezulu. Kuze kube manje, usuthandwa kakhulu nabantu abasha.
Ngokuvamile, indawo yezindebe zokwenza le nqubo iphephile kakhulu, ngoba kunenani elincane lemithambo yegazi kanye nokuphela kwezinzwa, ngaphandle kwalokho, indawo yokuphumula ingaphathwa kalula ngama-antiseptics.
Ikhono lokubamba izindebe.
Ukubhoboza imilenze kufanele kwenziwe ngugqirha ohlinzayo owaziyo indawo yemithwalo yegazi kanye nemisipha endaweni yokuphumula. Enye yezimiso eziyinhloko zenkambiso yindlela yokugcina izinsimbi. Ngakho-ke, ukubhoboza ukubhoboza kufanele kwenziwe enkampanini ekhethekile oyinyumba noma ekamelweni lokusebenza. Ukusebenzisa ithuluzi elinjenge-needle kufanele kube okukodwa. Kumele futhi ubilise ubucwebe.
Ngemuva kokubhoboza i-lip, akuvumelekile ukukhipha ubucwebe cishe inyanga. Ngalesi sikhathi, isilonda kumele siphulule ngokuphelele. Cishe izinsuku ezintathu zokuvuvukala nokubomvu kwezicubu. Isilonda ngaphambi kokuphulukiswa kwayo kufanele siphathwe nge-antiseptics.
Amahora amane emva kwenqubo, akuvunyelwe ukudla, utshwala noma ukubhema. Umphumela we-nikotine uzothinta isikhathi sokuphulukiswa kwesilonda, ngoba sinendawo yokwehlisa imithwalo yegazi. Phakathi nokuphulukiswa kwesilonda, kufanele wenqabe ukuthatha usawoti, ukudla okushisayo, ukudla okushisayo ngobuningi obukhulu.
Uma ufisa, kungaba khona izikhathi ezimbili ngesikhathi. Akunconywa ukwenza okuningi, ngoba ngenani elikhulu lamap puncture ngesikhathi esisodwa, kukhona ingozi yokuguqulwa kwezicubu zomlomo.
Uma i-lip engenhla ibhalwa ngakwesokudla, i-puncture ibizwa ngokuthi "Madonna";
Uma ukhonjiswe ngakwesobunxele, intombazane efanayo - "Monroe";
Ekubhobhozeni ezinhlangothini ezahlukene zomlomo - "Dahlia". Lokhu kubangela umphumela "womlomo ophukile";
Uma i-puncture isemlonyeni ongaphezulu futhi itholakala phakathi kwempumu kanye nenkaba ye-lip, ibizwa ngokuthi "i-Medusa".
ULabret - leli yigama lokubhoboza lip. Iqukethe ibha, ibhola (indandatho) nekhanda. Izinto zokukhiqiza ziyi-plastiki noma i-titanium.
Uma ukubhoboza umlomo, kunezinamba eziningi zokuphikisana. Njengenqubo evamile yokuhlinza inezinkambiso, nokubhoboza ukubhoboza - akunjalo. Ukuqedwa kufanele kwenziwe ngudokotela ohlinzayo.
Uma kunezifo zezingaphakathi zangaphakathi, akuvunyelwe ukubhoboza i-lip. Lezi zifo ezifana nokuhluleka kwe-cardiovascular and renal. Ukutheleleka ngokweqile kungabangela inkinga yesifo.
Lapho kunezifo ezibucayi, futhi akukhuthazwa ukwenza le nqubo ukuze ugweme izinkinga.
Nge-allergies ezinhlobonhlobo ezahlukene - ukusabela komzimba ensimbi kuyaziwa.
Uma zikhona izifo zesistimu yokujikeleza, kufaka phakathi ukuvala kwegazi okuphansi. Kulesi simo, kunengozi yokuphuma kwegazi nezinye izinkinga.
Futhi, kufanele uqaphele izifo zesikhumba - ukucasula ngemuva kokuba inqubo izokwanda.
Uma usebenzisa imithi ye-hormonal, kufaka phakathi, kanye nokukhulelwa kwezizalo. Uma zisetshenzisiwe, ukuzivikela komzimba kunciphisa. Futhi lokhu kuyingozi yokutheleleka okuhlukile.
Izinkinga ezingenzeka .
Ukutheleleka. Kungase kubangele ukuvuvukala kwezicubu zomzimba ngokubunjwa okuqhubekayo kwezibazi nezibazi. Esikhathini esibi kunazo zonke, ukuvuvukala kwamathisto athambile kuzodluliselwa kwezinye izitho zangaphakathi. Mhlawumbe, ebuchosheni - i-meningitis, i-encephalitis.
Ukulimala noma ukulimala kwamantombazane. Uma wenza udokotela ohlinzayo, lolu hlobo lwenkinga luyinto engavamile kakhulu. Kodwa ngezinye izikhathi kukhona indawo okufanele ube khona, ngakho awukwazi ukushiya ngaphandle kokunakekelwa.
Izibazi ze-Keloid. Kusukela kulesi sikhumba esivamile, ihluke ngokuthi ihlanganiswe isikhumba esincane esibucayi, ngezinye izikhathi sihamba ngaphezu kwesikhumba. Kudala ukubukeka okungathandeki. Ngezinye izikhathi kungenakwenzeka ukususa izibazi ezinjalo. Kukhona amathuba okukhula kwawo. Ubangela ubuhlungu, ukushisa, ukushaya. Lolu hlobo lwezinkinga luqondwa ngokuyinhloko yilowo nalowo wesiguli.
Ukukhula kwezimhlobiso ezivela engxenyeni engaphakathi yomlomo we-lip. Lolu hlobo lwenkinga luyatholakala uma i-labret ifushane kakhulu. Kulesi simo kuyadingeka ukuba usebenzise usizo lomhlinzeki ohlinzayo bese uyayithatha. Ukukhula kungaba kuphela lapho ukuhlobisa kusuka ekuphatheni okungalungile, noma ngokunakekelwa okubi.
Ukubhoboza imilomo - umhlobiso omuhle nesimanje wobuso bakho, kodwa ngekhwalithi ephezulu yokubulawa kwayo.
Ungabheka kanjani ukhulelwe ngesitayela
Indlela yokufihla imilenze egobile
Izifundo ngesitayela nesithombe
Isitayela saseScandinavia ezembatho
Ingabe kufanele ngishade nomfelokazi?
Lokho okufana nabantu besilisa ocansini
Indlela yokuhlanza ubucwebe begolide ekhaya?
Umfutho wegazi ophansi nezinga eliphezulu lenhliziyo: izimbangela nokuthi yini okufanele uyenze
Yini ukuhlanzwa komzimba?
I-bhisikidi roll ne-apple yokugcwalisa
Ukunakekela inja endala
Ubuhle be-Sunny: imithetho ye-TOP-3 ye-make-up yasebhishi
Indlela yokuphatha ukukhashelwa komyeni wakhe?
Ingulube ithembisa nge-cherry sauce